२ नं. प्रदेशकाे राजधानी नया“ सहरमा हुनुपर्छ-अशोक वैद - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता २ नं. प्रदेशकाे राजधानी नया“ सहरमा हुनुपर्छ-अशोक वैद
२ नं. प्रदेशकाे राजधानी नया“ सहरमा हुनुपर्छ-अशोक वैद
राज्य पुनर्संरचनापछि देश संघीयतामा गएको छ । प्रदेश कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा लामो छलफल र विवादपछि नयाँ संरचनाअनुसार अहिले सात प्रदेश कायम गरिएको छ । यद्यपि प्रदेशको नामकरण भने हुन बाँकी नै छ । संख्याका रूपमा प्रदेशको नामकरण गरिए पनि प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संविधानमा लेखिएको छ । त्यसकै लागि अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते हुँदै छ । प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले प्रदेशको राजधानीका विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको पनि प्रदेशको राजधानी मुख्य मुद्दा बनेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने यसलाई गौण नै राखेका छन् । प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने माग र दबाब आइरहे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने हो । तर, मतदाताहरूले भने आफ्नो पायकमा राजधानी हुनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । यसले राजनीतिक दलहरूलाई केही तरंगित बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले अहिले प्रदेशको राजधानीको विषयमा नबोले पनि यसको सांकेतिक रूपमा भने आ–आफ्नो अनुकूलका तर्क गरिरहेका छन् । प्रदेशको राजधानीको विषयमा निजी क्षेत्रको धारणा के छ ? राजधानी कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं वीरगन्ज महानगरपालिकाका सद्भावना दूत अशोक वैदसँग गरेको कुराकानीको सार :
Previous articleपर्सामा फाेरम अघि-अघि काँग्रेस पछि-पछी
Next articleसप्तरी २ बाट उपेन्द्र यादवको सानदार जीत